म्याग्दी । एघार वर्षदेखि दमका कारण सास्ती खेपेका बेनी नगरपालिका–२ का खड्गबहादुर थापाको स्वास्थ्यमा एकाएक परिवर्तन आएको छ । रोगका कारण घरमै बसेर बित्ने उनको दिनचर्यामा पनि अहिले परिवर्तन आएको छ । उनी ...
सुत्नेबेला यी ६ कुरा नखानुहोस्
हामीले खाना खाने समय लगभग निर्धारित हुन्छ । बिहान, दिउँसो, बेलुका यिनै तीन समयमा आफ्नो सहजताअनुसार मानिसले खानेकुरा खान्छन्। तर, बेलुकाको समयमा खाने खाना र सुत्नुअघि केही खाने बानी छ भने त्यसमा ध्यान ...
म ३० वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । हप्तामा दुई पटक श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क राख्छु । यौन सम्पर्कका बेला मेरो वीर्य चाँडै स्खलन हुने गरेको छ । श्रीमती बेलाबेलामा झर्किने गर्छिन् । यौन सम्पर्कको अवधि कति हुन...
तौल कम गर्न अपनाउनसु यी २१ उपाय
युवाहरू डाइटिङलाई फेसन नै सम्झिन्छन् आजकाल । प्लस टु पुस्ताका किशोरीहरू त डाइटिङलाई जीवनको अभिन्न अंग नै ठान्छन् । चिकित्सक युवा अवस्थामा डाइटिङ गर्न प्रोत्साहन गर्दैनन् । यो उमेर शरीरको हरेक अंग व...
प्रश्न: म २५ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ । मलाई सेक्सप्रति बढी नै चाहना हुन्छ । यस्तो चाहना ९ कक्षा पढ्दादेखिकै हो । म अहिले बीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु । अझै पनि त्यस्तै हुन्छ । दिनमा दुई–तीन पटक ...
के छाला चाउरिनबाट जोगाउनु छ ? यसो गर्नु !
बृद्ध हुनु प्राकृतिक नियम हो । उमेर बढेसँगै अनुहारको छालापनि चाउरी पर्छ र तन्किन सुरु गर्छ । तर उमेर नपुग्दै छाला चाउरियो भने के गर्ने ? युवा अवस्थामा नै छाला चाउरी पर्न थाल्यो भने अनावश्यक र महंगो क...
अष्ट्रेलियामा साथी बनाउँदाका फाईदा
मेलबर्न । अष्ट्रेलिया नेपालीसहित विश्वका धेरै मुलुकका विद्यार्थीहरुको हबको रुपमा रहेको छ । त्यसैले यहाँ एउटै कक्षामा पनि विभिन्न भाषा,संस्कृति र वर्गका विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । फरक फरक देश,भाषा र ...
हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘इ’ विशेषगरी गर्भवती सचेत हुनुपर्ने
काठमाडौँ । गर्मीको समय सुरु भइसकेको छ । यो समयमा जाडोमा भन्दा मानिस विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ । यो मौसममा खानेकुरा, पानी र धुलोधुवाँ र हावाका माध्यमबाट विभिन्न सरुवा रोगका भाइरस सक्रिय रहने भए...
मृगौला दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा पदयात्रा
बिहिबार, फाल्गुन २६, २०७३
काठमाडौ । विभिन्न कार्यक्रम गरि विश्वभर आज विश्व मृगौला दिवस मनाइदै छ । मृगौलालाई बचाउन र यसमा हुन सक्ने संक्रमण, रोग बारे जनचेतना अभिबृद्धि गर्न यो दिवश मनाउने गरिन्छ । सन् २००६ देखि मार्च महिनाको द...
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्‍यो पोलियो अवरोध गर्ने १८ स्वास्थ्यकर्मीलाई निलम्बन (नामावली सहित)
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयको १८ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई निलम्बन गरेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको, अति संवेदनशील र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवालाई अवरोध गरेर पदीय जिम्मेवारी अनुरु...
यौन जिज्ञासा : सेक्सप्रति बढी नै चाहना हुन्छ, म के गरुँ ?
म २५ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ । मलाई सेक्सप्रति बढी नै चाहना हुन्छ । यस्तो चाहना ९ कक्षा पढ्दादेखिकै हो । म अहिले बीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु । अझै पनि त्यस्तै हुन्छ । दिनमा दुई–तीन पटक हस्तमैथुन...
काठमाडौँ । स्वास्थ्यकर्मीको अवरोधका कारण यसअघि खुवाउन नसकिएका १५ जिल्लामा आज (शनिबार) र भोलि(आइतबार) पोलियो थोपा खुवाइँदै छ । तराईका कैलाली, बर्दिया, बाँके, कपिलवस्तु, पर्सा, बारा, रौतहट, धनुषा, महोत...
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल स्वास्थ्य संस्था गुणस्तर प्रमाणीकरण परिषद् गठन गर्ने भएको छ । प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि सो परिषद् गठन...
महिलाहरूलाई पुरुष मिलनको रहर कुन बेला अधिक हुन्छ ?
एजेन्सी । एउटा अध्ययनका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म । यो अवधिमा महिलालाई सहवासमा बढी आनन्द आउँछ । जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर...
गर्मीबाट जोगिन अनार सेवन गर्न चिकित्सकको सुझाव
एजेन्सी । त्यसो त सबै फल स्वास्थ्यकव लागि धेरै नै लाभकारी मानिन्छ। तर अनार अरु फलभन्दा स्वास्थ्यको लागि निक्कै स्वास्थय वर्द्धक मानिन्छ। भिटामिन ए, सी, इ र फोलिक एसिड तथा एन्टी अक्सीडेन्टले भरिपूर्ण र...
यी हुन बियर पिउनुका स्वास्थ्य फाइदाहरू
बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३
तपाई बियर कत्तिको पिउनुहुन्छ ? वियरलाई अल्कोहल नै मानेर नपिउनेहरु पनि छन् । बियर धेरै पिउनेहरु पनि छन् । तर खान जाने बियरका बेफाइदा पनि धेरै छन् । १.बाथ र हाडजोर्नीको रोगबाट छुट्कारा हाम्रो हाडको ज...
फेसबुक केका लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ ? जवाफमा एकरूपता नहुन सक्छ । कतिका निम्ति यो केवल ‘टाइम पास’ वा ‘मुड फ्रेस’ गर्ने माध्यम हुनसक्छ । कसैले यसलाई साथीभाइ, आफन्तसँग जोड्ने सम्पर्क सूत्रका रूपमा प्रयोग ...
अस्पतालहरुलाई गाउँकेन्द्रीत गर्ने नयाँ व्यवस्था भयो लागु
काठमाडौं । सामुदायीक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई गाउँकेन्द्रीत गराउने उद्धेश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । सामुदायीक अस्पताल अनुदान निर्देशीका का अधिकांश व्यवस्था संशोधन गरी मन्त्र...
सोमवार, माघ २४, २०७३
काठमाडौँ । हरेक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान यो वर्ष आगामी फागुन २१, २२ र २३ गते सञ्चालन हुने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तगर्तको इपि...
सेक्सका बारेमा चिन्तीत हुनुहुुन्छ ? यसरी गर्न सकिन्छ समस्या समाधान
एजेन्सी । सेक्सको बारेमा असहज हुँदा अनि तनाव लिदा सेक्सको समयमा दुखाइको कारण बन्न सक्छ। एक नयाँ खोज अनुसार हरेक दश महिलामध्ये एकले सेक्सको क्रममा दुखाई अनुभव गर्छन्। रोयल कलेज अफ अब्सटेट्रीशियस र ग...